Knowledge Archives - Today News
ဆိုငျကယျစီးမောငျးနှငျသူမြားအတှကျ ထပျမံပျေါထှကျလာတဲ့ မျောတျောယာဉျ ဉပဒအေသဈ
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ ဥပဒေသစ်တွေထုတ်လိုက်ပြီနော် အားလုံးဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ…. (2022-ဥပဒေသစ်) ယာဉ်နံပါတ်မထင်ရှား = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-က)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေသုံးသိန်း. ထောင် သုံးလ။ အခြားနံပါတ်တပ် = ကျူးလွန်သည့်ပုဒ်မ(၈၄-ခ)။ အရေးယူသည့်ပုဒ်မ-၉၄ = ဒဏ်ငွေ
အပွောငျးအလဲတှကွေားမှာ အကောငျးဆုံးရငျဆိုငျကြျောဖွတျနိုငျဖို့ လငျးယုနျဌကျတှကေို အတုယူလိုကျပါ
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ လင်းယုန်ငှက်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်အရှည်ဆုံး ငှက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အသက် ၇၀ အထိ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဟာ အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့အသက် ၄၀ မှာ ခက်ခဲတဲ့ ဖြစ်စဉ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို ချကြရပါတယ်။
လငျမယားကှာရှငျးမှုအရ ကလေးအုပျထိနျးခှငျ့နဲ့ပတျသကျတဲ့ သိထားသငျ့သောအခကျြမြား
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ လင် မယားကွာရှင်းမှုအ ရ ကလေးအုပ် ထိန်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သိထားသင့်သောအချက်များ ကလေး အုပ်ထိန်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့လင်မယားတွေ ရန်ဖြစ်ပြီဆိုမယားလုပ်သူကကလေးခေါ်ဆင်းသွားတာလင်က ကလေးခေါ် ဆင်းသွားတာတွေဖြစ်နေကျ /ပြီးမှသားကိုအမေသမီးကိုအဖေ ပိုင်တယ်ဆိုပြီး ကလေးလုကြပြဿနာဖြစ်ကြနဲ့ နောက်ဆုံးကြားထဲကကလေးကမြေစာပင်ဖြစ်/စိတ်ဒဏ်ရာတွေရကလေးရှေ့ရေးမကောင်းဖို့များသွားပြီ။ တကယ်တော့ သားဆို
ပုရဈကွျော ကွိုကျတဲ့သူမြား ဒီစာကိုသာ ဖတျကွညျ့လိုကျတော့
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ ငါမသိဘဲ စားခဲ့မိတဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် ငရဲကြီးရှစ်ထပ်မှာ နာကျင်မှုဝေဒနာငရဲဘုံဆိုတာရှိပါတယ်။ သူတို့ ခံစားနေရတဲ့ ဝဋ်ဒုက္ခတွေဟာ လက်ရှိလူတွေ စားနေတဲ့ ပရစ်တွေရဲ့ ဘဝနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ပရစ်ကြော်ကို ကျွန်တော်လဲ အရင်ကအရမ်းကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ကားဘကျထရီ ဖွုတျလိုကျလြှငျ ကွုံတှရေ့မယျ့ ပါဝါဝငျးဒိုး ပွဿနာ
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ ကားဘက်ထရီ ဖြုတ်လိုက်လျှင် ကြုံတွေ့ရမယ့် ပါဝါဝင်းဒိုး ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း သင့်ကားရဲ့ ဘက်ထရီကိုအကြောင်းကြောင့် ဖြုတ်ပြီး ပြန်တပ်တဲ့အခါ ကြုံတွေ့ရမယ့် ပြဿနာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ကားတံခါးမှန်တွေကို ယာဉ်မောင်းဘက်က ခလုတ်ကနေ တင်/ချ
ပန်းစိုက်သူများအတွက် တွက်ချေကိုက်တဲ့ လီလီပန်း တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စိုက်ပျိုးနည်း
unicode တဈဧကစိုကျရငျ သိနျးတဈထောငျ ပွနျရတဲ့ လီလီပနျး တဈပိုငျတဈနိုငျ စိုကျပြိုးနညျး ဘုရားပဲတငျတငျ အလှပဲထိုးထို လီလီပနျးလေးနဲ့မှ ကုသိုလျပိုရသညျ ၊ ကကျြသရရှေိသညျ ၊ အလှထူးသညျ ထငျကွသညျ။ မင်ျဂလာ အခမျးအနား မြားပငျ ဖွဈစေ၊
ဒေါ်လာ ၂.၆ သန်းတန်တဲ့ ၎င်းရဲ့ ရှေးနှစ်ထပ်တိုက်အိမ်ကြီးကိုမပြီး နေရာအသစ်သို့ပြောင်းရွေ့ဖို့အတွက် ဒေါ်လာ ၄ သိန်းအကုန်ကျခံခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
unicode ဒျေါလာ ၂.၆ သနျးတနျတဲ့ ၎င်းငျးရဲ့ ရှေးနှဈထပျတိုကျအိမျကွီးကိုမပွီး နရောအသဈသို့ပွောငျးရှဖေို့အတှကျ ဒျေါလာ ၄ သိနျးအကုနျကခြံခဲ့တဲ့ အမြိုးသား အမရေိကနျနိုငျငံ California ပွညျနယျ San Francisco မွို့ရှိအမြိုးသားတဈဦးဟာ ခုနှဈဘလောကျအကှာရှိ နရောအသဈဆီသို့ အိမျပွောငျးတဲ့အခါ
unicode မုနျလာဥဖွူသုပျ ပွုလုပျနညျး မုနျလာဥဖွူ -ခွဈထားပါ။နှမျး (လှျောရငျ ပိုစားကောငျးတယျ၊ မထညျ့လညျး ရပါတယျ)။သံပရာသီး။ငရုတျသီးစိမျး။ရှောကျရှကျ ပါးပါးလှီး။ငံပွာရညျ ။ကွကျသှနျနီဆီခကျြ။ဆား။ကွကျသှနျနီ ပါးပါးလှီး မုနျလာဥဖွူ ခွဈထားတာကို ဆားနညျးနညျးရယျ သံပရာရညျရယျနဲ့ ရောနယျပွီး ၁၅မိနဈလောကျ နှပျထားပေးနျော။
မြန်မာငွေ ကျပ်သိန်းပေါင်း (၁၁,၄၀၀) တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပိန်းပင်
unicode မွနျမာငှေ ကပျြသိနျးပေါငျး (၁၁,၄၀၀) တနျဖိုးရှိတဲ့ ပိနျးပငျ ထိုငျးနိုငျငံက ပိနျးပငျဈေးကှကျကို လှုပျခတျသှားပွီး သတငျးဌာန အတျောမြားမြားက တငျပွနကွေတဲ့ ပိနျးပငျအမညျက Colocasia Psylocke ဖွဈပါတယျ။ပိနျးပငျပိုငျရှငျက မိခငျအပငျကို ဘတျ ၂၀ သနျး
“စစ်ရေးအရ ဗျူဟာကျကျ တည်ဆောက်ထားတဲ့ မြန်မာတို့၏ ကွေ့ချောင်းခံတပ်ကြီး အကြောင်း”
unicode မွနျမာသက်ကရာဇျ ၁၂၂၂ ခုနှဈ၊ ခရဈနှဈ ၁၈၆၀ ခုနှဈမှာ စတငျတညျဆောကျခဲ့တဲ့ ဒီခံတပျကွီးဟာ သုံးနှဈ လောကျကွာအောငျ တညျဆောကျခဲ့ရပါတယျ။ ကှခြေ့ောငျးခံတပျကွီးရဲ့ တညျနရောကတော့ မကှေးမွို့မှ ၁၂ မိုငျခနျ့အကှာမှာ တညျရှိသလို ဧရာဝတီမွဈကွီး၏ အရှဘေ့ကျကမျးမှာ
Copyright © 2022 Today News. All rights reserved.